Ulwazi oluthe kratya malunga nemoto ezinokuzimela yeApple | Ndisuka mac
Siphela namhlanje ngenqaku elibuyela kumxholo weprojekthi ekucingelwa ukuba iApple isebenza ngokufihlakeleyo, inxulumene nokuba ingaba yintoni imoto ezimeleyo. Kule mpelaveki ndibone isiqwenga seendaba kwi-intanethi esiqikelele ukuba kule minyaka idlulileyo I-Apple inokukwazi ukuthenga iTesla uqobo ... andazi ...
U-Elon Musk yi-CEO yangoku yeTesla kwaye ungumlinganiswa ongasebenziyo kakhulu kwi-ecosystem ye-Apple Ukuya kungqina ngamanye amaxesha ukuba iApple yeWebhu yeApple yeyona nto yokudlala kune-smartwatch. Nangona kunjalo, ngalo lonke ixesha iTesla ilahla enye yeenjineli zayo, ngu-Apple obathathayo, abathi kwasekuqaleni basenza ukuba sicinge ukuba i-Apple iyabandakanyeka kwilizwe leemoto.
Ukuba siyayeka sicinge ngamanyathelo athe u-Apple awathathe kweli lizwe lemoto, kuye kuthi qatha into yokuba kudala befuna ukumilisela iCarPlay ukuze abantu bayiqhele. Zimbalwa ezi Iimpawu zeemoto ezingasafakwanga kwizithuthi zazo okanye ekucingelwa ukuba zenze njalo kwiinyanga ezimbalwa.
Kwelinye icala sineemoto ezilayishwe iikhamera eziqokelela idatha kwiindawo ezininzi eMelika nakwamanye amazwe ukuze kuphuculwe usetyenziso Iimephu, isicelo esele sigubungela ama-34 e-United States eneenkcukacha ezintle zendlela kunye neendlela zothutho.
Kwaye ekugqibeleni Sinayo lexus ezo zibonwe kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo zilayishwe ziikhamera kunye neenzwa. Ezinye izithuthi ezihamba ezitalatweni ngokuzimela kuye kwafuneka bafumane amaphepha-mvume kwabasemagunyeni abasele bekhululwe.
Yonke into ibonisa ukuba iApple ilungiselela into enkulu Kwaye into ebesiyikholelwa ekuqaleni ibikukuphuculwa kwesicelo seMaphu esiya kuthi sihambelane ngqo nale projekthi. Siza kubona ukuba iphi na into kwaye ezi zithuthi zineekhamera zibonwe okokugqibela eConnecticut, isixeko esikwiphondo laseNew England apho kukho umthetho owalela olu hlobo lwezithuthi ezizimeleyo kancinci. ngedatha esasiyisongela. Ukuba ufuna ukubona ifayile ye- Uluhlu lweendawo apho iApple sele irekhodile idatha, siyakudibanisa i-web yayo ngqo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ulwazi oluthe kratya malunga nemoto ezinokuzimela yeApple